CollegeBound Saint Paul – A pathway to college for all of Saint Paul's children
Tokkoon tokkoon ijoollee carraa CollegeBound Sain Paul qabaachuu ni qabaatu
Har’uma galmaa’uu dandeessu
Kolleejji-Baawondiin Seeyint Poul kun maatiin barnootaa fi fuul-duree ijoolee isaaniitiif deggersa akka taasisaniif gargaara
Har’a hawaasa keessan cimsuuf hojjechuu’
Amajjii 1, 2020 fi isa irraa eegalee tokkoon tokkoon daa’imman dhalatanii karaa lakkoofsa herregaa Kolleejjii kan gara sadarkaa barnoota olaanaa fi leenjii ogummaatti geessu irratti kan galmeessinu ta’a.
Kaka’umsi lakkoofsa herregaa CollegeBound Saint Paul kan magaalaa waliigalaa jalqaba irratti kan inni fayyadu, maatiin barnootaa fi fuul-duree ijoollee isaanii keessatti bu’uura deggersaa cimaa ta’e kaa’anii akka darbaniifii dha. Maatiin qarshii dabalataa gumaachuu kan danda’an, lakkoofsa herregaa isaanii akkasumas abjuun isaanii daa’ima isaanii waliin guddachaa yoo adeemuus ilaaluu kan danda’an ta’a.
Carraa ijoollota isaanii isa gara fuula duraatiif yaadanii qusachuu fi karoorsuun maatiidhaaf ulfaataa ta’uu waan danda’uuf hawaasni walitti dhufuudhaan CollegeBound Sain Paul jedhamu qopheessuudhaan ijoollota isaaniitiif akka qusatanii fi akka karoorsan gargaaree jira. Barnoota ijoollee keessaniitiif amma irraa jalqabuun qusachuu fi karoorsuu eegaluun kan yeroo isaan umurii kolleejiitiif qophaa’aniitii wajjin garaa-garummaa guddaa qabaachuu danda’a.
CollegeBound Sain Pau inni jedhamu kun kan inni ittiin qophaa’eef akkasumas, kan inni yaadameef maatiiwwan hawaasicha keessatti umurii mana barumsaa sadarkaa lammaffaa booda gara barumsaatti ergatan gargaaruuf. Ammaa eegalee waa’ee barnoota daa’ima keessaniitiif qusannaa fi karoora baasuu eegaluun, kan yeroo isaan Kolleejii seenuuf qophaa’anii waliin yoo wal bira qabamee ilaalamutti garaa-garummaa guddaa ni qabaata.
Daa’ima keessan har’uma galmeessaa
Waa’ee sagantichaa caalmaatti hubachuuf
Hawaasa keessan caalmaatti jabeessuuf deggeraa
E-MEEYILII AMAYYOOMSUUF OF GALCHAA
CollegeBound ammayyoome argachuuf armaan gaditti teessoo kan e-meeyilii keessanii galchaa.
Teessoo, kan e-meeyilii keessanii itti galchuun gara dirsariitii kan Magaalaa Saint Paul tti isin qajeelcha.